Saafi Films - News: Hoteelada Degmada Baraawe oo aad u qaaliyoobay lana la�yahay meel laga Dago kadib markii Magaaladaasi ay ..
Hoteelada Degmada Baraawe oo aad u qaaliyoobay lana la�yahay meel laga Dago kadib markii Magaaladaasi ay ..
Wararka naga soo gaaray Degmada BaraaweEe Gobolka Sh/Hoose ayaa sheegaya in Hoteelada Degmadaasi kuyaala ay aad u buux dhaafeen hadana aysan jirin Hoteelo faaruq ah oo laga degi karo Magaaladaasi kadib markii aad loo buux dhaafiyay.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa Magaalada Baraawe gaarayay Hogaamiyaal badan oo katirsan Xarakada Al-Shababa iyo sidoo klae kuwa Al-Qaacida ee kusugan gudaha Soomaaliya iyo ilaalo badan ay wataan.
Hoteelada Baraawe ayaana la sheegay in Xubnahaani katirsan Al-Shabaab iyo Al-Qaacida ee Magaalada soo gaaray si KMG ah loo dajiyay Hoteelada intii looga helayo guryo ,waxanaa la sheegay in Milkiilayaasha Hoteelada ay saro u dhigeen Qiimaha Hoteelada mar hadii uu suuq fiican yeeshay Hoteelada aadna loo soo buux dhaafiyay.
Hogaamiyaasha Sar sare ee katirsan Al-Shabaab kuna sugan Baraawe ayaa waxaa kamid ah Sheekh Xasan Daahir Aweys ,Fu�aad Shangolle iyo Sheekh Cali Dheere Afhayeenka Shabaab iyo saraakiil kale oo katirsan Al-Shabaab iyo Al-Qaacida,.
Qul qulka Saraakiishan iyo Dagaalyahanada katirsan Al-Shabaab ayaa yimid kadib markii ay kasoo barakaceen Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubbada Hoose oo maalmo kahor kasoo baxeen Shabaab lana wareegeen Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM.
4,489,470 unique visits